Shudder Ayaa Dhaafay Hal Milyan oo Macaamil | iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Shudder wuxuu dhaafiyey Hal Milyan oo Macaamil ah
Warar Naxdin LehShudder (filim)
Shudder wuxuu dhaafiyey Hal Milyan oo Macaamil ah
Adeegga baahinta argagaxa / xiisaha leh ee 'AMC' oo dhan, Shudder, ayaa saaka ku dhawaaqay inay dhaafeen calaamadaha macaamiisha 1 milyan. Adeeggu wuxuu si isdaba joog ah u dhisayay xubinimadiisa tan iyo markii ugu horreysay ee ay u heleen dadweynaha dib ugu soo noqoshada 2016, laakiin waxay arkeen koror ballaaran sanadkii la soo dhaafay iyadoo lagu daray barnaamijkeedii asalka ahaa.
"Ku darista taxanaha asalka ah iyo filimada turjumaadaya kobacayaga oo u rogay Shudder inuu noqdo adeeg waajib ku ah qofkasta oo xiiseynaya argagax weyn, xiise ama madadaalo ka sarraysa," Miguel Penella, AMC Networks SVOD President ayaa ku yiri hadal aan saakay helnay. “Diiradeena hagar la'aanta ah ee ku saabsan barnaamijyada tayada leh, nuxurka hal abuurka ah iyo helitaanka hal abuurka soo socda ee soo socda ayaa u suurtageliyay Shudder inay ka dhex baxdo adduunka tirada badan ee adeegyada rukunka. Guusha Shudder waxay imaaneysaa iyadoo adeegyadeena kale ee SVOD bartilmaameedka loo yahay - Acorn TV, Sundance Now iyo UMC — ay sii wadaan koboca ay ku sii kordhayaan macaamiishooda iyagoo si aad ah ugu adeegaya taageerayaasha xiisaha leh waxyaabaha ay aadka u jecel yihiin. ”
Mawduucaas waxaa ku jiray taxanaha asalka ee sanadkii hore Creepshow, oo ku saleysan asalka George A. Romero / Stephen King filimki 1982 iyo sidoo kale sanadkaan martigeliyaha, filim la qoray, la toogtay, laguna sii daayay kaliya 12 toddobaad inta lagu gudajiro karantiil kaas oo hada lagu qiimeeyo filimka # 1 ee sanadka ee yaanyo qurmay.
Giancarlo Esposito qaybtii ugu horreysay ee filimka Shudder's Creepshow
Marka lagu daro barnaamijyadooda asalka ah iyo kuwa gaarka ah, waxay sidoo kale cusbooneysiiyaan jilitaankooda filimada caadiga ah iyo kuwa cibaadada ah bil kasta si ay uga dhigaan waxyaabaha ay bixiyaan ay u cusbooneysiiyaan macaamiishooduna ugu soo laabtaan wax badan.
Adeegga qulqulka ayaa sidoo kale ku faanay ballaarintiisa dhulal cusub iyada oo gacan ka geysaneysa koritaanka rukunka. Markii ugu horreysay ee la helay, Shudder waxaa laga heli jiray oo keliya Mareykanka, Kanada, iyo Boqortooyada Midowday laakiin tan iyo markii uu ku faafay Jarmalka horraantii sannadkan ayay u guureen New Zealand iyo Australia. Isticmaalayaashu waxay ku daawan karaan boggooda internetka, laakiin adeegga ayaa sidoo kale laga heli karaa Roku, Fire TV, Apple TV, iyo XBox sidoo kale waxay leeyihiin "kanaallo" u gaar ah barnaamijka Apple TV iyo Amazon Prime ee dhulalka qaarkood.
Ma waxaad tahay macmiil Shudder ah? Noo sheeg waxaad jeceshahay ee ku saabsan faallooyinka!
Argagixisada Tightwad Talaadada - Filimo Bilaash ah oo loogu talagalay 9-22-20
Hulu 'Run' oo ay jileyso Sarah Paulson ayaa dejineysa Taariikhda Soosaarka Noofambar